» रङ्गीचङ्गी खानेकुरा कसरी स्वास्थ्यका लागि लाभदायक ?
२० आश्विन २०७८, बुधबार ०९:२७
बीबीसी । हरेक दिन हामीलाई खानामा के खाने भन्ने द्विविधा हुन्छ । र यसमा सबैभन्दा पहिले उपलब्धता अनि त्यसको मूल्य र अन्त्यमा मात्र स्वस्थकर छ छैन भन्ने आधारमा हामीले के खाने भन्ने निर्णय लिइहेका हुन्छौँ । तर हाम्रो समग्र डायटलाई हेर्दा हामीलाई सबै आवश्यक पोषण तत्व पुगिरहेको छ भन्ने कसरी थाहा पाउने ?
अनुसन्धानकर्ताहरुले यसअघि पनि हामीले खाने परिकार सकेसम्म विविध हुँदा राम्रो भन्ने गरेका छन् । यसमा सबैभन्दा बढी सुझाइएको उपाय भनेको ‘रेन्बो कलर फुड’ अर्थात रङ्गीचङ्गी खानेकुरा खानु हो । सबै रङका खानेकुरा खानुले विशेषगरी हाम्रो मस्तिष्कलाई स्वस्थ राख्न मद्दत गर्दछ भने मुटु रोगको जोखिम पनि कम गराउँछ । किनकि विभिन्न रङमा छुट्टाछुट्टै किसिमका स्वस्थकर गुण हुन्छन् ।
परम्परागत मेडिटेरियन डायटमा हामीले विभिन्न थरी ‘न्युट्रियन्ट्स’ र ‘फाइटो–न्युट्रियन्ट्स’ (पौष्टिक तत्व) सेवन गरिरहेका हुन्छौँ । फाइटोन्युट्रियन्ट्स भनेको बिरुवाले उत्पादन गर्ने एकदमै सानो रसायनिक तत्व हो जसले हामीलाई ठूला ‘न्युट्रियन्ट्स’ पचाउनमा मद्दत गर्दछ भने शरीरबाट विषाक्त हटाउनमा पनि प्रमुख भूमिका खेल्छ ।
त्यसैले सबै रङका खानेकुरा खानुले यस किसिमका मुख्य पोषण तत्व छुट्ने जोखिम कम हुन्छ । यसको अर्थ यदि हामीले कुनै एउटा रङको खानेकुरा कम खाने गरेका छौँ भने हामीले त्यसबाट प्राप्त हुने पौष्टिक गुण छुटाइरहेका छौँ ।
उदाहरणका लागि नीलो या बैगुनी रङका खानेकुरा जस्तै ब्लुबेरीको बिरुवामा ‘एन्थो साएनिन’ भन्ने विशेष तत्व पाइन्छ यसले मुटु सम्बन्धी रोगको जोखिम घटाउँछ भने मधुमेहबाट पनि जोगाउन सक्छ । यसैगरी खानेकुरालाई पहेँलो रङ दिने ‘फ्लेभोन्स’ ले पनि मुटु रोगको जोखिम कम गराउँदछ ।
पोषण तत्वका साथै बिरुवामा हुने यस्ता विशेष तत्वहरु हाम्रो शरीरका निश्चित भागसम्म पुग्ने भएर पनि विविध रङका खानेकुरा सेवन गर्न आवश्यक मानिन्छ । जस्तै ‘लुटेइन’ क्यारोटेनोइड समुहमा पर्ने एक एन्टि–अक्सिडेन्ट हो । यो हरियो सागपात र पहेँला सब्जीहरुमा उच्च मात्रामा पाइन्छ । यही लुटेइन हाम्रो आँखाको पछाडिको भागमा पुग्ने गर्दछ र ‘मेकुलर डिजेनेरेसन’ नामक उमेरसँगै हुने आँखाको रोगको जोखिम घटाउँछ ।
त्यस्तै अन्य रिसर्चहरुमा चाहिँ फ्लेभोनोइड्सले दिमागका लागि विषाक्त मानिने अल्जाइमर गराउने पदार्थलाई अवरोध गरि मस्तिष्कको स्वास्थ्यमा सुधार ल्याउन मद्दत गर्ने देखाएको छ । २० वर्षसम्म ५० हजार भन्दा धेरै मानिसहरुको डायटबारे अध्ययन गरिसकेपछि हाभर्डकी टिआन–शिन येहले फ्लेभोनोइड प्रशस्त भएको खानेकुरा सहित सुन्तला, मरिच, सेलेरी र अङ्गुर खानेहरुमा ‘डिमेन्सिया’ हुने या दिमागी क्षमता घट्ने समस्या कम हुने गरेको पत्ता लगाएकी हुन् ।
फ्लेभोनोइड्सलाई आफ्नो डायटमा समावेश गरि लाभ प्राप्त गर्न कहिल्यै ढिला नहुने पनि उनले बताइन् । येह भन्छिन् रङ्गीचङ्गी खानेकुरा खानुले एकै किसिमको खाना धेरै मात्रामा खाइँदाको गम्भीर असरबाट पनि मान्छेलाई जोगाउनेछ । उनी भन्छिन्, “हामीले खाने खानेकुराहरु एकदम जटिल किसिमका हुन्छन् । जस्तै सुन्तलाको जुसले दिमागी क्षमता घट्ने जोखिमलाई कम गराउँछ तर त्यही सुन्तलाको जुस धेरै खायो भने यसले टाइप–टु डाइबटिज गराउँदछ ।”
यसरी विविध रङका खानेकुरा खानुले समग्र रुपमा हाम्रो सागसब्जी अनि फलफुलको सेवन पनि बढाउँछ । अध्ययनका अनुसार रङ्गीचङ्गी खानेकुरा खान थाल्दा त्यसले व्यक्तिको स्वस्थकर डायट सेवन बढाउँदछ । बीबीसीबाट